Inona no atao hoe Platform Digital Asset Management (DAM)? | Martech Zone
Ny fitantanana fananana nomerika (DAM) dia ahitana asa fitantanana sy fanapahan-kevitra manodidina ny fampidirana, fanamarihana, katalaogy, fitahirizana, fakana ary fizarana ireo fananana nomerika. Ny sary nomerika, ny sary mihetsika, ny horonan-tsary ary ny mozika dia mampiseho ny faritra kendrena amin'ny haino aman-jery pananana fitantanana (sokajy DAM).
Inona no atao hoe Digital Asset Management?
Ny DAM fitantanana fananana nomerika dia fomba fitantanana, fandaminana ary fizarana rakitra media. Ny logiciel DAM dia ahafahan'ny marika mamolavola tranomboky misy sary, horonan-tsary, sary, PDF, maodely ary votoaty nomerika hafa azo karohina sy vonona hapetraka.
Sarotra ny manamboatra ny raharaha fitantanana fananana nomerika tsy miseho milaza tsy an-kijanona ny mazava ho azy. Ohatra: miankina amin'ny media nomerika ny varotra ankehitriny. Ary ny fotoana dia vola. Ka ny mpivarotra dia tokony handany betsaka amin'ny fotoanany haino aman-jery nomerika araka izay azo atao amin'ny asa mahomby kokoa, mahasoa kokoa ary tsy amin'ny fihenan-danja sy ny fikarakarana tokantrano tsy ilaina.
Fantatray ireo zavatra ireo. Mahagaga ihany koa fa, nandritra ny fotoana fohy nandraisako anjara tamin'ny fitantarana ny tantaran'ny DAM, dia nahita fitomboan'ny fahatsiarovan-tenan'ny fikambanana momba ny DAM aho. Izany dia milaza fa, vao tsy ela akory izay, ireo fikambanana ireo dia tsy mbola namantatra izay zavatra tsy hita popoka.
Rehefa dinihina tokoa, ny orinasa iray dia matetika manomboka miantsena manodidina ny rindrambaiko DAM rehefa mahatsapa fa, voalohany, manana be dia be (vakio ny "volony tsy voatanisa") ny fananana nomerika ary, faharoa, ny fiatrehana ny tranom-boky nomerika lehibe dia mila lavitra be. fotoana be nefa tsy manome tombotsoa ampy. Marina izany nanerana ny indostria isan-karazany anisan'izany ny fampianarana ambony, ny dokam-barotra, ny famokarana, ny fialamboly, ny tsy mitady tombony, ny fikarakarana ara-pahasalamana ary ny teknolojia ara-pitsaboana.
Fijerena ny sehatra fitantanana ny fananana nomerika Widen
Eto no idiran'ny DAM. Ny rafitra DAM dia misy endrika sy habe maro, saingy namboarina hanao zavatra vitsivitsy farafaharatsiny izy ireo: mitahiry afovoany, mandamina ary mizara fananana nomerika. Ka inona no tokony ho fantatrao hitarika ny fikarohan'ny mpivarotra anao?
Modely fanaterana DAM
Widen vao haingana namoaka taratasy fotsy tsara manazava ny fanavahana (ary mifanindry) eo amin'ireo vahaolana SaaS vs. Hosted vs. Hybrid vs. Open Source DAM. Loharano tsara hijerena raha manomboka mandinika ny safidinao DAM ianao.
Ny zavatra tena ilaina fantarina kosa dia ny tsirairay amin'ireo teny telo ireo dia fomba iray mamaritra ny DAM (na rindrambaiko hafa, momba an'io) arakaraka ny masontsivana samihafa. Tsy mifanelanelana izy ireo — na dia tsy misy miharihary aza ny SaaS sy ny vahaolana napetraka.
SaaS DAM ny rafitra dia manolotra fahalalahana amin'ny resaka workflow sy ny fidirana amin'ny vidiny IT kely indrindra. Ny rindrambaiko sy ny fanananao dia ampidirina ao anaty rahona (izany hoe, lohamilina lavitra). Na dia mpivarotra DAM malaza aza dia hampiasa fomba fampiantranoana izay azo antoka indrindra, ny fikambanana sasany dia manana politika manakana azy ireo tsy hamela fampahalalana saro-pady sasany ivelan'ny toerana misy azy ireo. Raha sampam-pitsikilovana governemanta ianao, ohatra, mety tsy afaka manao SaaS DAM ianao.
Ny programa napetraka kosa dia “an-trano” avokoa. Ny asan'ny orinasanao dia mety mitaky karazana fanaraha-maso ny haino aman-jery izay azo avy amin'ny fihazonana ireo angona sy ireo lozisialy ao amin'ny tranonao ihany. Na izany aza, tokony ho tsapanao ny zava-misy fa, raha tsy hoe manohana ny angon-drakitrao amin'ny lozisialy lavitra ianao, ity fomba fanao ity dia mamela anao hisokatra amin'ny loza mety hitranga ary hamela ny fanananao tsy ho azo alaina tanteraka. Mety ho kolikoly amin'ny data izany, saingy mety ho halatra, loza voajanahary na lozam-pifamoivoizana ihany koa.
Ary farany, misy loharano misokatra. Ilay teny dia manondro ny kaody na maritrano an'ny rindrambaiko mihitsy, fa tsy hoe alefa lavitra na tsia amin'ny rindrambaiko ao an-trano ilay rindrambaiko. Tsy tokony ho latsaka ao anaty vela-pandrika ianao amin'ny fametrahana ny fanapahan-kevitrao raha mety aminao ny loharano misokatra raha toa ka misy vahaolana aroso na apetraka. Ary koa, tokony ho marihinao ny zava-misy fa ny loharano misokatra ho lozisialy dia manome lanja fotsiny raha toa ianao na olon-kafa manana loharanom-bola hividianana vola amin'ny programa malleable.
Endriky ny fitantanana ny fananana nomerika
Toy ny hoe tsy ampy ny isan-karazany amin'ny maodely fanaterana, misy ihany koa ireo karazana endri-javatra maro samihafa. Ny mpivarotra DAM sasany dia tsara kokoa noho ny hafa amin'ny fanaovana antoka fa mifanaraka tsara amin'ny filanao manokana izy ireo alohan'ny hanandramana hivarotra anao amin'ny rafitra misy azy, noho izany dia zava-dehibe ny miditra amin'ny fihazana DAM anao miaraka amin'ny lisitry ny fepetra takiana araka izay azo atao.
Ny iray amin'ireo fandrosoana lehibe amin'ny teknolojia DAM dia ny fahafahan'izy ireo mitambatra amin'ireo sehatra fanovana sy famoahana lehibe rehetra - ny maro amin'izy ireo dia manana fizotran'ny fankatoavana feno. Midika izany fa ny mpamorona anao dia afaka mamolavola sary iray, mahazo valiny avy amin'ny ekipa, manao fanitsiana, ary manosika mivantana ny sary namboarina ho any amin'ny rafitra fitantanana votoaty.
Mbola tsara kokoa aza: zarao ho sokajy tsy maintsy ananana sy tsara hoanina ny zavatra ilainao. Tokony ho marihinao koa izay endri-javatra ilaina noho ny fitsipika, lalàna, na fitsipika hafa mifehy ny tsenanao na ny indostrianao.
Izany rehetra izany dia ny miantoka fa tsy miafara amin'ny endri-javatra vitsivitsy ianao ka tsy afaka manatsara ny fahombiazan'ny workflows araka izay azo atao na ny endri-javatra maro izay hitanao fa mandoa lakolosy sy sioka izay tsy ilainao na oviana na oviana. na te hampiasa.
Tombontsoa azo avy amin'ny sehatra fitantanana ny fananana nomerika
Mieritreritra ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiharana a rafitra fitantanana fananana nomerika amin'ny resaka vidin'ny fanapahana or fitahirizana fotoana tsy ampy fotsiny. Tsy tafiditra ao anatin'izany ny fiantraikan'ny DAM amin'ny fikambananao sy ny loharanonao.
Eritrereto kosa ny momba ny DAM amin'ny lafiny repurposing. Matetika izahay no mampiasa io teny io mba hanondroana ny fomba ahafahan'ny rindrambaiko DAM manome fahafahana sy manamora ny famerenana indray ny fananana nomerika tsirairay, saingy (rehefa ampiasaina tsara) dia mety hisy fiantraikany mitovy amin'ny asa, dolara ary talenta izany.
Makà mpamorona. Mety handany 10 isaky ny 40 ora amin'izao fotoana izao izy amin'ny fitadiavana fananana mihoa-pampana, ny asa fanaraha-maso ny dikan-teny, ary ny fikarakarana trano famakiam-boky sary. Ny fametrahana DAM sy ny fanafoanana ny filana rehetra dia tsy midika izany fa tokony hanapaka ny oran'ny mpamorona anao ianao. Ny dikan'izany dia ny ora fiasana tsy mahomby sy tsy mahasoa amin'izao fotoana izao dia azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny herin'ny mpamorona: famolavolana. Toy izany koa ny mpivarotra, ekipa marketing, sns.
Ny hatsaran'ny DAM dia tsy hoe manova ny paikadinao na manatsara ny asanao. Izy io dia manafaka anao hanaraka ilay tetika hafa mahery setra kokoa ary hahatonga ny asanao hifantoka bebe kokoa amin'ny fotoana bebe kokoa.
Widen dia namoaka ity sary lalindalina ity izay mitondra anao ny raharaham-barotra amin'ny fampiasam-bola amin'ny sehatra Digital Asset Management.
Tags: famoronana fanananafizarana fanananaFitantanam-panananafanatsarana ny fanananafandrindrana ny fanananafitehirizana ny fanananatombony amin'ny tohodranoContent Marketingtohodranon'iinfografika tohodranofitantanana fananana nomerikasehatra fitantanana fananana nomerikamailaka MarketingSary torohayhaino aman-jery pananana fitantananainona no atao hoe tohodranoinona ny sehatra fitantanana fananana nomerikahihamalalakamanitatra ny fananana
Ahoana ny famoahana ny fahanao bilaogy Shopify ao amin'ny template mailaka Klaviyo anao